Kala Bixidii Qabyaaladda ee Jeelka Manatee oo Dhameystiran - Ellicott Dredges
USA: Piedroba Marine Construction (PMC) Oo Soo Gabagabeynaya Kala Sooca Qufulka Kala Duwan ee Manatee Pocket
Qodista qodista Florida iyo qandaraaslaha badda Piedroba Marine Construction (PMC) ayaa maanta ku dhawaaqay in si guul leh loo dhameystiray qeybtii Mashruuca Qodista jeebka Manatee. PMC waxaa kireystay Dickerson oo reer Florida ah horaantii sanadkan si ay uqariyaan dhowr wabiyo oo ku xeeran kanaalka weyn. PMC's 2009 8 ® Ellicott® summad jaranjarada wareegaya waxaa loo adeegsaday in lagu kala gooyo kanaalshooyinka dhererkiisu yahay 20-fiit. Alaabada la jeexjeexay ayaa lagu wareejiyay laba saldhig oo kor u qaadaya masaafo ugu badnaan 14,000 cagood.
Maamulaha guud ee PMC iyo maamulaha, Dr. Prieto-Portar wuxuu si aad ah ugu qanacsan yahay howsha si habsami leh loo soo gabagabeeyey wuxuuna amaaney wada shaqeynta labada shaqaalood: Mashruuca Qodista Jeebka Maandeeyaha. Shaqaalaheena, oo uu hogaaminayo kormeeraha guud Wayne Riley, waxay qabteen shaqo aad u fiican iyagoo ka shaqeynayay dhamaan caqabadihii mashruucan soo bandhigay. ” Dickerson oo ah madaxweynaha Florida, Larry Dale ayaa ku amaanay PMC waxqabadkeeda wanaagsan: “Kooxdayada shirkada waxay ku mahadsanyihiin xirfadaha iyo khibrada maaraynta mashruuca PMC, iyo xamaasada ay muujiyeen shaqaalahaaga goobta. PMC waa mid wax soo saar leh isla markaana qiimo jaban waxaanna rajeyneynaa inaan sii wadno wadashaqeynta ”.
Luis Prieto y Munoz, madaxweynaha PMC wuxuu intaas ku daray: “Manatee Pocket waa mid ka mid ah jaaliyadaha doomaha ugu waaweyn ee Mareykanka. Dhowr maalmood ka hor, waxaan ku hoyanaynay horteenna Dugsiga Chapman ee Seamanship. Waa wax lagu qanco in la arko dad si buuxda ugu raaxeysanaya natiijooyinka shaqadeenna ”.
Ku saabsan Piedroba Marine Construction:
Piedroba Marine Construction (PMC) waa ganacsi yar oo iskaa ah oo shirkad leh haweeney qandaraas ku leh Koonfurta Florida. PMC waxay bixisaa adeegyo dhameystiran iyo adeegyo injineernimada deegaanka oo ay ku jiraan dhismaha badda, iyo qulqulatada dhammaan koonfurta-bari ee Mareykanka.
Waxaa laga daabacay Qoynta Maanta
Ku Bilaab Mashruucaaga Bilaashka ah ee Biyaha (Elwayott)